तपाइको भोट कसलार्इ ? गगन की राजन भट्टरार्इ (भोट दिनको लागि समाचारको तल पट‍टी Comment Box मा लेख्नुहोला) - Muldhar Post
पत्रपत्रिकाबाट २०७४, २८ कार्तिक मंगलवार 403 पटक हेरिएको
काठमाडाैं- दुई युवाको उम्मेदवारीकै कारण यसपटक काठमाडौं क्षेत्र ४ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका गगन थापा र वाम गठबन्धनबाट एमालेका राजन भट्टराई चुनावी मैदानमा छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–दुवै उम्मेदवार घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहँदा बाजी कसको पोल्टामा पर्ने हो ? अडकलबाजी भइरहेको छ ।
यो क्षेत्रको चुनाव प्रचारको विशेषता के देखिएको छ भने दुवै उम्मेदवारले एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएका छैनन् । सञ्चारकर्मीले सोधेका प्रश्नमा पनि उनीहरू कूटनीतिक तरिकाले जवाफ दिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त भट्टराई भन्छन्, ‘यहाँ खानेपानी, सडक, कलेज केही पनि विकास नगरेको व्यापक जनगुनासो छ । हामीलाई गफ गर्नेभन्दा काम गर्ने नेता चाहिएको भन्छन्, त्यसकारण म जित्छु ।’
यसअघिका उम्मेदवारले यस क्षेत्रको विकास नगरेको पटक–पटक आरोप लगाए पनि भट्टराईले थापाको नामचाहिँ उच्चारण गरेनन् ।